Global Voices teny Malagasy » Rivo-doza Myanmar 2008 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2019 6:17 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Hita fa lasa fitaovana manan-danja ho an'ny fitantarana ny krizy ny Twitter. Araho ny Vaovao momba an'i Myanmar amin'ny Twitter  avy amin'ny Global Voices. Jereo ihany koa ny MBS feed  mahafinaritra.
Mong Palatino .no tonian-dhatsoratry Global Voices Azia Atsimo-atsinanana.
May 16 – Myanmar: Lahatsarin'ny olon-tsotra taorian'ny rivo-doza  Nargis 
Manana sarintany ifarimbonana  momba ny fandalovan'ny rivo-doza nanerena an'i Myanmar ny Associated Press.
Lahatsary mampihoro-koditra mampiseho olona am-polony maro maty tao anatin'ny rivo-doza, ato . Nametraka ity tafatafa tamin'ny lahatsary  ity niaraka tamin'ny sisa velona iray tao amin'ny YouTube (via Birma News) ny Al Jazeera.
Sary ao amin'ny Flickr, ahitana ny fahavoazana ao Yangon, avy amin'i Luis Rene , sy disasteremergencycommittee . Marobe ireo olona nampiditra sary tao amin'ny Picasa, anisan'izany i MaungHla , Nay Linn , cyclonerelief , Salai Thang .
Ato  ireo sary avy amin'ireo mpiasa mpamonjy voina tamin'ny rivo-doza. Manana bilaogy sy sary ihany koa ny Manampy ho an'ny Taranaka vaovao  sy ny Klioba mpanome rà RAVEN .
Bilaogy Heart Station  mitanisa ireo anarana, adiresy sy tranonkala misy ireo fifandraisana samihafa marobe mandray fanomezana ho an'ny ezaka fanavotana.
Pejy fitantarana manokana ataon'ny Global Voices tamin'ny Fihetsiketsehana Birmana 2007 .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/24/141723/
 MBS feed: http://twitter.com/mmblogs
 Myanmar: Mbola mila fanampiana: https://globalvoicesonline.org/2008/09/29/myanmar-aid-still-needed/
 Myanmar: Lahatsarin'ny olon-tsotra taorian'ny rivo-doza: https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/16/video-burmamyanmar-in-cyclone-nargis-aftermath/
 Myanmar: Feo amin'ny alalan'ny sioka : https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/14/myanmar-voices-through-tweets/
 Myanmar: Misioka ny loza nateraky ny rivo-doza: https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/14/myanmar-twittering-the-cyclone-disaster/
 Myanmar: Ireo tafavoaka velona tamin'ny rivo-doza Nargis: https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/11/myanmar-survivors-of-cyclone-nargis/
 Myanmar: Asa fanampiana miadana : https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/08/myanmar-slow-relief-work/
 Myanmar: Fahavoazana nateraky ny rivo-doza tsy mbola nisy toy izany: https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/06/myanmar-unprecedented-cyclone-disaster/
 Myanmar: Ny tafio-drivotra lafatra: https://www.globalvoicesonline.org/2008/05/05/myanmar-the-perfect-storm/
 handrakitra an-tsarintany ny angon-drakitry ny rivo-doza tao Myanmar: http://google-latlong.blogspot.com/2008/05/unosat-layer-of-myanmar-cyclone-data.html
 sarintany ifarimbonana: http://hosted.ap.org/specials/interactives/_international/myanmar_cyclone/index.html
 tafatafa tamin'ny lahatsary: http://myamarnews.blogspot.com/2008/05/myanmar-cyclone-survivor-tells-her.html
 Luis Rene: http://www.flickr.com/photos/luisrene/collections/72157604897579881/
 Nay Linn: http://picasaweb.google.com/dewaing/TripToHtanPinKone
 Salai Thang: http://picasaweb.google.com/cbthang/Nargis?authkey=kJZckA4Vzq0
 Manampy ho an'ny Taranaka vaovao: http://helpinghands4ng.blogspot.com/
 Klioba mpanome rà RAVEN: http://raven-bdc.blogspot.com/
 Google: Myanmar Cyclone: http://www.google.com/myanmarcyclone/index.html
 UNICEF USA: http://www.unicefusa.org/myanmar
 Fihetsiketsehana Birmana 2007: https://www.globalvoicesonline.org/specialcoverage/burmese-protests-2007/